बधाई ! समाजसेवी ईशा गुरुङको अपिलमा सियोनालाई ३० लाख १३ हजार रुपैंया भन्दा बढी सहयोग…हेर्नुहोस् । – PathivaraOnline
Home > समाचार > बधाई ! समाजसेवी ईशा गुरुङको अपिलमा सियोनालाई ३० लाख १३ हजार रुपैंया भन्दा बढी सहयोग…हेर्नुहोस् ।
admin November 21, 2020 समाचार, समाज	0
उहाँको अपिलबाट धेरैले जिवन दान पाए, धेरैले पी’डितहरुले राहत पाएका छन । यसैबिच सामाजिक संजाल एक भाइरल सानी नानी सियोना श्रेष्ठको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ । लन्डनमा रहेर नेपाली गरीब दु’खीहरु आ,सुँ पुछ्ने काम गर्नुहुन्छ । उहाँलाई उच्च सम्मान छ युवा आवाज परिवारको तर्फबाट । कुनै स्वा’र्थ नराखी आफुले सक्ने सयोग र अरुलाई सयोग गर्न भनी अभियानहरु सधैं चलाऊने गर्नुहुन्छ ।
अहिले उहाँ सियोना बचाउ अपिल चलाईरहनु भएकोछ । आजसम्म उहाँले ३० लाख १३ हजार भन्दा बढि पैसा संकलन गरी सियोना नानु को खातामा पठाई सक्नु भएको छ । यति तपाईं हरु नि सयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने उहालाई संपर्क गर्न सक्नु हुने छ ।